Maxamed Cabdulaahi Maxamed - Wikipedia
Maxamed Cabdulaahi Maxamed "Farmaajo" (, ) (dhashay 1962 kuna dhashay Muqdisho, Soomaaliya) waa Soomaali diblomasi, borofasoor iyo siyaasi isku ah noqdayna Madaxweynihii 9aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya laga soo bilaabo 8 Febraayo 2017. Wuxuu soo noqday Raysulwasaare laga soo bilaabo Nofeembar 2017 ilaa Juun 2011 waana aasaasaha ahan Xoghayaga-Guud ee Xisbiga Tayo.
Madaxweynihii 9aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya
8 Febraayo 2017 – dhammaadka xilka wuu dhammaaday. (hagaaji)
[Xasan Cali Khayrre
1 Nofeembar 2010 – 19 June 2011
Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex (Ku meel gaar)
Guddoomiyaha Xisbiga Tayo
5 Maajo 2012
Danjiraha Soomaaliya ee Maraykanka
2 Wax barshadiisii
3 Soo shaac bixitaan
4 Doorashadii Madaxweynenimo
Maxamed wuxuu ku dhashay Muqdisho lkn qoyskiisa waxay ka soo jeedaan Jubaland, sidoo kale wuxuu u dhashay beesha Mareexaan. Aabihiis wuxuu caan ka ahaa degmada Waaberi waxaana loo yaqaanay "Formaajo", ereyga farmaajo waa erey talyaani ah.
Waaliddiinta Maxamed waxay ahaayeen dhaqdhaqaaqyo xiriir la leh Ururka Dhallinyarada Soomaaliyeed (SYL), xisbi siyaasadeedkii ugu horreeyay ee Soomaaliya. Intii lagu jiray 1970-yadii, aabihiis wuxuu ka shaqeeyey shaqaale dowladeed oo ka tirsan Waaxda Gaadiidka Qaranka.
Maxamed waxa uu aaday iskuulaadka boodhinka ah ee Soomaaliya.  Intii u dhaxeysay 1985 iyo 1988, wuxuu ka ahaa xoghaye safaaradda Soomaaliya ee Washington, D.C ..  Intii u dhaxeysay 1989 iyo 1993, wuxuu soo dhameystay shahaadada heerka koowaad ee Taariikhda iyo Shahaadada Masters-ka ee cilmiga siyaasada oo uu ka qaatay Jaamacada Gobolka New York ee ku taal Buffalo ee Buffalo, New York.
Maxamed waa muwaadin Soomaaliyeed. Kahor Agoosto 2019, wuxuu sidoo kale qabtay dhalashada Mareykanka, kaasoo uu si mutadawacnimo ah uga tanaasulay.
Awood maamul, Maxamed wuxuu ka soo shaqeeyay Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Soomaaliya ka hor burburkii dowladdii dhexe 1991-kii iyo dagaalkii sokeeye ee ka dambeeyay.  Intii u dhaxeysay 1985 iyo 1988, wuxuu sidoo kale noqday xoghayihii koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Washington wuxuuna la soo shaqeeyay hay'ado xuquuqul insaanka kala duwan.
Laga soo bilaabo 1994 illaa 1997, Maxamed waxaa loo doortey inuu noqdo Wakiilka guud ee Maamulka Guriyeenta Degmada Buffalo, wuxuuna halkaas ka soo shaqeeyey isagoo ah gudoomiyaha maaliyadda.   Wuxuu sidoo kale ahaa maareeyaha kaysaska barnaamijka ku-takri-falka magaalada dhexdeeda 1995 ilaa 1999-kii. Intii u dhaxeysay 2000 iyo 2002, Maxamed wuxuu ahaa xiriiriyaha ganacsiga laga tirada badan yahay Qeybta Fursadaha Shaqo u Siman ee Erie County.  Laga soo bilaabo 2002 ilaa loo magacaabay Raiisel Wasaaraha dabayaaqadii sanadkii 2010, wuxuu ka soo shaqeeyay Wakiilka Shaqada Sinnaanta ee Waaxda Gaadiidka Gobolka New York ee Buffalo.
Maxamed wuxuu sidoo kale baray xirfadaha hogaaminta iyo xallinta khilaafaadka Kulliyadaha Bulshada ee Erie, taasoo qayb ka ah nidaamka SUNY.
Wuxuu waxbarashadiisa aasaasiga ku qaatay magaalada Muqdisho. Wuxuu shahaadada B.A iyo M.A ka qaatay Jaamacadda New York ee ku taalla Buffalo sanadihii 1997-dii iyo 2000.
Soo shaac bixitaan
Farmaajo ayaa ku guuleystay xilka Madaxweynaha Soomaaliya 8 Febraayo, kaddib doorasho adag oo uu la galay Labo Madaxweynayaal hore oo uu kula tartamay wareegga labaad ee doorashada. Farmaajo ayaa wareega labaad helay codod badan, taasoo keentay in Musharaxii ku xigay ee Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu tanaasulo. Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa 14 Oktober ee sanadkii 2010 loo magacaabay xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, xilligaas oo uu si rasmi ah uu saaxada siyaasadda u soo galay.
Maxamed Cabdulaahi Maxamed (Twitter)
Dawladdii Qabyada Madaxweyneyaashii Soomaaliya
tan iyo 2017 Talada Haya
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxamed_Cabdulaahi_Maxamed&oldid=203543"
Last edited on 16 Luuliyo 2020, at 08:31
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Luuliyo 2020, marka ee eheed 08:31.